Khasaare dhimasho, dhaawac iyo hanti oo kadhashay dabkii Garoowe (dhegayso) – Radio Daljir
Khasaare dhimasho, dhaawac iyo hanti oo kadhashay dabkii Garoowe (dhegayso)
Janaayo 30, 2018 4:57 g 0
Ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyooday dabkii galabta kakacay kaalin shidaal oo ku taala magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland, sideed ruuxna waa dhaawac oo xarumaha isbitaalada ayaa la dhigay.
Dabka ayaan la ogayn waxa dhaliyay, waxaana goobta isugu yimid dadwayne badan, wararka dareenka leh ayaa waxaa ka mid ah inuu jirin gaari dab damis oo ay leedahay shacabka iyo dowladda.
Wasiir kuxgeenka arimaha gudaha iyo dowladaha hoose Puntland Cabdulaahi Xaashi Qoobdeero ayaa uga digay shacabka inay kala fogeeyaan kaalimaha shidaalka iyo mehradaha cuntada, iyadoona taasi ay tahay mid mar walba keeni karta khatar dab.
Hoos kadhagayso Xasan Haykal ayaa wasiirka waraystay.
Dab khasaare hanti gaystay oo ka kacay Garoowe oo aan lahayn dab-damis